28 / 02 / 2018 01 / 03 / 2018 ဂရေဟမ် 919 Views စာ0မှတ်ချက် 30525 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition ကို, Avengers, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ
၏လွှတ်ပေးရန်နှင့်တိုက်ဆိုင်ရန် Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများသည် Avengers: Infinity စစ်ပွဲကိုအခြေခံသည် Lego အွန်လိုင်းဆိုင်ကပစ္စည်းအတော်များများကိုပေးလိမ့်မယ်။
အသစ်အကွာအဝေး Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ Avengers: Infinity စစ်ပွဲနှင့် ၇၆၁၀၅ Hulkbuster: Ultron Edition ကို အခြေခံ၍ ထုတ်ကုန်သစ်များစတင်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်မတ်လ ၃ ရက်၊ စနေနေ့တွင်ဖြန့်ချိမည်။ shop.LEGO.com စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေတွင်အခမဲ့ပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုအခမဲ့ပေးမည်။
Polybag ပရိသတ်များသည် ၃၀၅၂၅ ဂါးဒီးယန်းသင်္ဘောကိုအခမဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိကြမည်။ Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများအစုံ။ ယူအက်စ်အေတွင်အနည်းဆုံးအသုံးစရိတ်သည် ၇၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသေးစားသင်္ဘောသည် Milano တွင် Infinity စစ်ပွဲ၌ရရှိမည့်ပုံစံသစ်ကိုအခြေခံထားသည်။
ကန့်သတ်ထုတ်ဝေမှု art ပုံနှိပ်ခြင်းကိုလည်း $ 25 သုံးဖြုန်းအတူကွာပေးလိမ့်မည် Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ ယူအက်စ်အေအတွက်အစုံ - ဗြိတိန်လိုအပ်သောသုံးစွဲသေးအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။ The Marvel artAvengers: Infinity War မှုတ်သွင်းခဲ့သောမူရင်းရုပ်ပြစာအုပ်ကိုခဲတံဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့သော Ron Ron Lim ကပုံနှိပ်ဖော်ပြသည်။ ရောင်စုံပုံနှိပ်မိတ္တူ ၄၀,၀၀၀ သာရရှိနိုင်သည်။
နှင့်အတူသူများ Lego VIP အကောင့်များကိုမှာသည် Lego Marvel Super Heroes 76105 Hulkbuster: Ultron Edition ကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်သည် အထူးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ Ron Lim, ဒီတနင်္ဂနွေပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းသီးသန့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု ၁၃၀၀၀ သာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘယ်တော့လဲ shop.LEGO.com Force Friday II ၏အရောင်းမြှင့်တင်မှုတွင်ယခင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများကဖောက်သည်အများအပြားသည်မမှန်ကန်သောပုံနှိပ်စာကိုရရှိပြီး၎င်းကိုလဲလှယ်။ မရပါ။ ဒီအချိန်, နှစ်ခုပဲကွဲပြားခြားနားသောထုတ်နှင့်အတူမျှော်လင့်ပါတယ် Lego Group သည်၎င်းတို့အားမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပို့ခြင်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများကိုအောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
Avengers: Infinity War ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမတ် ၁ ရက်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ အစုံကနေယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
← တရားဝင်တစ်ကိုယ်တော်: တစ် Star Wars ပုံပြင်ဖော်ပြချက်ဖော်ပြ?
Toys R Us UK စတိုးဆိုင်များတွင်ရှင်းလင်းခြင်းလျှော့စျေး →